काठमाडौं, १४ जेठ । भारतीय काँग्रेस आईकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धी बिरामी छिन् । उनलाई काँग्रेस आईका वर्तमान अध्यक्ष एवं सोनिया पुत्र राहुल गान्धीले उपचार गराउन विदेश लैजाने भएका छन् । राहुलले ट्वीटरमा सन्देश ट्वीट गर्दै सोनियालाई उपचारका लागि विदेश लैजान लागेको बताए । उनले ट्वीटरमा केही दिन उपचारका लागि बाहिर रहने बताए । काँग्रेस सुत्रका अनुसार हरेक वर्ष सोनिया...
काएरो, १४ जेठ । इजिप्टको उच्च अदालतले इस्लाम धर्मगुरु प्रोफेट मोहम्मदलाई बदनाम गरेको आरोपमा भिडियो साइट यूट्यूबलाई एक महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । अदालतको निर्णय अन्तिम भएको भन्दै यस उपर पुनरावेदन नहुने बताइएको छ । मोहम्मद हमिद सालेम नामक एक वकीलले यूट्यूबविरुद्ध निजी लगानीमा क्यालिफोर्नियामा निर्मित १३ मिनेट लामो भिडियोमार्फत सन् २०१२...
पाकिस्तानमा जुलाई २५ मा आम चुनाव
पाकिस्तान, १३ जेठ । पाकिस्तानमा आउँदो जुलाई २५ मा आम चुनाव हुने भएको छ । राष्ट्रपति मममून हुसैनले २५ जुलाईमा आम चुनाव गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन् । केन्द्र र प्रान्त संसदका लागि एकै दिन चुनाव हुने राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले बताएका छन् । पाकिस्तानको अहिलेको सरकारको कार्यकाल चाँडै सकिँदैछ । अहिले शाहीद खाकान अब्बासी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री छन् । गएको वर्षको...
ट्रम्पको आरोपमा चीनको आपत्ति : शान्ति वार्ता भाडिएकै हो त ?
काठमाडौं, १२ जेठ । चीनमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कारियाली शान्ति वार्ता हुन नदिन उत्तर कोरियालाई उक्साएको भन्ने इशाराप्रति चीनले आपत्ति प्रकट गरेको छ। सिँगापुरमा हुने तय भएको बैठक रद्द हुनसक्ने भन्दै तीन दिनअघि ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँगको भेटवार्तापछि उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनको रवैया बदलिएको बताएका थिए। ट्रम्पले...
बैठक स्थगनपछि उत्तर कोरियाको जवाफ : 'वार्तामा बस्न जहिले पनि तयार छौ'
काठमाडौं, ११ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले किम जोन उनसँगको वार्ता स्थगित गरेसँगै जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्नका लागि तयार रहेको उत्तर कोरियाले प्रतिक्रिया दिएको छ । उत्तर कोरियाका उपविदेशमन्त्री किम केइ–ग्वानले ट्रम्पको तर्फबाट अहिले आएको यस किसिमको निर्णय दुःखलाग्दो रहेको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले खुलारुपमा शत्रुताको भावना राखेको भन्दै यो...
काठमाडौं, १४ जेठ । भारतीय काँग्रेस आईकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धी बिरामी छिन् । उनलाई काँग्रेस आईका वर्तमान अध्यक्ष एवं सोनिया पुत्र राहुल गान्धीले उपचार गराउन विदेश लैजाने भएका छन् । राहुलले ट्वीटरमा सन्देश ट्वीट गर्दै सोनियालाई उपचारका लागि विदेश लैजान...
काएरो, १४ जेठ । इजिप्टको उच्च अदालतले इस्लाम धर्मगुरु प्रोफेट मोहम्मदलाई बदनाम गरेको आरोपमा भिडियो साइट यूट्यूबलाई एक महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । अदालतको निर्णय अन्तिम भएको भन्दै यस उपर पुनरावेदन नहुने बताइएको छ । मोहम्मद हमिद...
पाकिस्तान, १३ जेठ । पाकिस्तानमा आउँदो जुलाई २५ मा आम चुनाव हुने भएको छ । राष्ट्रपति मममून हुसैनले २५ जुलाईमा आम चुनाव गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन् । केन्द्र र प्रान्त संसदका लागि एकै दिन चुनाव हुने राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले बताएका छन् । पाकिस्तानको...
काठमाडौं, १२ जेठ । चीनमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कारियाली शान्ति वार्ता हुन नदिन उत्तर कोरियालाई उक्साएको भन्ने इशाराप्रति चीनले आपत्ति प्रकट गरेको छ। सिँगापुरमा हुने तय भएको बैठक रद्द हुनसक्ने भन्दै तीन दिनअघि ट्रम्पले चिनियाँ...
काठमाडौं, ११ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले किम जोन उनसँगको वार्ता स्थगित गरेसँगै जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्नका लागि तयार रहेको उत्तर कोरियाले प्रतिक्रिया दिएको छ । उत्तर कोरियाका उपविदेशमन्त्री किम केइ–ग्वानले ट्रम्पको तर्फबाट अहिले आएको यस किसिमको...
एजेन्सी, ११ जेठ । इजरायलले सिरियामा गरेको एक हमलामा अमेरिकाद्वारा निर्मित विशेष लडाकू विमान प्रयोग भएको खबर बाहिर आएसँगै एफ्–३५ को चर्चा विश्वभर सुरु भएको थियो । विश्वकै सबैभन्दा महङ्गो, आधुनिक र शक्तिशाली बताइने यस विमानलाई इजरायलले अमेरिका भन्दा पहिले...
अमेरिकाले वार्ता रद्द गरेपछि उत्तर कोरियाले के भन्यो ?
अमेरिका, एजेन्सी । उत्तर कोरियाले अझै पनि आफू वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आउँदो जुन १२ मा सिंगापुरमा हुने भनिएको उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनसँगको वार्ताका रद्द गरेपछिको प्रतिक्रियामा उत्तर कोरियाले यो निकै...
वासिङ्टन, १० जेठ । संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरियाका बीचमा हुन लागेको शिखर बैठकप्रति चीनको समर्थन रहेको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यिले बताएका छन् । सो शिखर बैठकले अरु धेरै कुराहरुका अतिरिक्त कोरियाली प्रायद्वीप क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि...
चीनमा आवाज प्रदूषण बढ्यो : अमेरिकाद्धारा आफ्ना कर्मचारीलाई सतर्क गरायो
चीन भन्छ : अध्ययन भइरहेको छ : काठमाडौं, १० जेठ । आवाज प्रदूषणको समस्या बढेपछि चीनमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवाजको प्रदूषणबाट बच्न अमेरिकाले सचेत गराएको छ । अमेरिकी कर्मचारीहरुमा आवाज प्रदूषणको कारण अनौठो संकेतहरु देखिएसँगै अमेरिकाले यस्तो...
ट्वीटरका भोका ट्रम्प : कसैको ट्वीटर ब्लक गर्न भने ट्रम्पलाई रोक
काठमाडौं, १० जेठ । पाँच करोडभन्दा बढी फलोअर्स भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीटरका भोका छन् । उनी हरेक सूचना ट्वीटरमा दिने गर्छन् । उनै ट्रम्पले आफूलाई मन नपर्ने ट्वीटर ब्लक पनि गर्न चाहन्थे होला । तर अब उनले कसैको पनि ट्वीटर ब्लक गर्न नपाउने...